Ha Noqon Caqli Badan Si Aad U Hesho Jawaabaha | Martech Zone
Noqo Mid Cilli Leh Oo Aad Ku Heli Karto Jawaabaha
Jimcaha, Sebtember 11, 2009 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Horraantii toddobaadkan, waxaan soo dhigay qoraal aan ku dhiirrigelinayo badeecad aad u wanaagsan. Codsigu wuxuu ahaa mid garaafis leh oo aad u faa'iido badan… laakiin dhab ahaantii waan garan kari waayey waxa ay tahay sameeyey or sida inaad u isticmaasho shaqo la'aan.
Shirkadda ayaa isla markiiba ku soo qortay Twitter-keeda in is dhexgalka uu ahaa “mid fudud”. Waxaan ugu jawaabay, "mahadsanid!". Uma aanan doodi doonin caqligooda. Way iska cadayeen inay ka caqli badnaayeen isticmaalkooda tech farsamo casri ah iyo geek.
Faras waxaad u horseedi kartaa biyo, laakiin kama cabbi kartid cabitaanka.
Dabcan, interface wuxuu ahaa fudud si iyaga. Way dhisteen! Codsiga su'aashu wuxuu dhab ahaantii ku jiray suuqa, oo aan isbeddelin, in muddo ah oo leh korsasho aad u gaabis ah. Hmmm… markaa maanaan helin korsasho deg deg ah waxaanan ka helnay jawaab celin ah in isdhexgalkayagu uu ahaa mid cakiran. Malaha labada ayaa isku xidhan?
Xaqiiqdii ma ahan cadaalad in la caayo isticmaale adigoo u maleynaya inay carrab la 'yihiin. Hadal ahaan marka loo eego, waa inaad markasta u qaadataa inay carrab la 'yihiin! Ma dhahayo dhamaan dadka isticmaala waa carrab la '… kaliya waxay dejinayaan' qaab maskaxeed 'markaad kafekerayso khibradaada macaamiisha.
In aan wadahadal lala yeesho Clint Page, wuxuu ku tilmaamay baraha bulshada inay yihiin ilo aan macquul ahayn oo macluumaadka macaamiisha ah - taasoo u badbaadineysa shirkadda lacagta iyo waqtiga sahaminta, kooxaha xallinta, iyo istiraatiijiyadda. Macaamiishiisa ayaa jecel sheyga, waana ay yaqaanaan waxa ay u baahan yihiin si ay noloshooda ugu fududaato… iyo sidoo kale Dotster oo guuleysta. Dotster waxay ahayd inuu salka dhigto si uu u bilaabo dhageysiga iyaga!
Haddii aad tahay shirkad tiknoolaji ah, wadahadalku horay ayuu uga dhacayaa wax soo saarkaaga! Waad raadin kartaa Twitter, isku day a Bogga Taageerayaasha ee Facebook, isticmaal Warqadaha Google ama si fudud u dhaji boostada oo codso ra'yi-celin. Haddii adeegsadayaashaadu ogaadaan inaad dhageysaneysid, waxay ku siin doonaan jawaabaha aad u baahan tahay. Kaliya waa inaad noqotaa caqli ku filan si aad jawaabaha u hesho.
Maxaa Ka Khaldan Kaarkaaga Ganacsiga?
Ku dhis Traffic Blog adoo wata eCourse iyo Cinwaanka Labaad
Sep 11, 2009 at 4: 48 PM
Bal ka fikir, ninkani waa hal daahitaan fudud oo ka fog inuu awoodo inuu nasto gacantiisa. Koofiyadaha sameeya waxay u baahan yihiin inay dib uga fikiraan isku xirnaanta 'chapeau interface'.
Sep 12, 2009 at 4: 14 PM
Newsflash ee soo saarayaasha softiweerka. Si kasta oo ay u qurux badan tahay ama u qurux badan tahay barnaamijkaagu, haddii ay tahay in aan in ka badan 60 ilbidhiqsi ku qaato sidii aan u ogaan lahaa sida wax loo qabto, waan tirtiraa.
Sep 14, 2009 at 6: 54 PM
Farriin weyn Doug, wax intaa ka badan kulama oggolaan karo!